Badbaadada iyo Amniga WordPress | Martech Zone
Monday, July 1, 2013 Isniin, February 1, 2016 Douglas Karr
Boggeena waxaa lagu marti galiyay Flywheel sidoo kale waxaan nahay xulafooyin sababtoo ah waxaan aaminsanahay inay tahay barnaamijka ugu wanaagsan ee martigelinta WordPress ee meeraha. Sababtoo ah caan ka ahaanshaha WordPress, waxay noqotay bartilmaameed caan ah oo ay leeyihiin haakarisku. Taasi macnaheedu maahan inaysan noqon karin barxad aamin ah, in kastoo, macnaheedu yahay inay ku jirto danta ugu weyn ee isticmaale kasta si loo hubiyo inay ilaaliyaan barxada, khariidadaha iyo inay aaminaan goobahooda Waanu ogolaanay Flywheel wax badan noo samee!
WordPress waa mid ka mid ah nidaamka maareynta maareynta waxyaabaha ugu caansan (CMS) ee la isticmaalo qiyaastii 17% ka mid ah bogagga internetka ee maalmahan laga helo internetka waxaa ku shaqeeya CMS-kan. Isticmaalka WordPress ee sii kordhaya amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ayaa sidoo kale noqotay mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee wax laga qabanayo. Sannadkii 2011 in ka badan 144,000 oo goobood oo ereyo saxaafadeed ah ayaa la jabsaday lambarkani wuxuu gaadhay 170,000 sanadka 2012.
WPTemplate wuxuu soo saaray wax dhameystiran infographic ee WordPress iyo dhaqamada ugu fiican ee ku saabsan sida loo ilaaliyo amaan iyo badbaado.
Tags: laanwordpress la jabsadaybadbaadada wordpressamniga wordpress
Bulshadu Waa Dhibaatada, Maaha Warbaahinta